Thwebula Vimeo 1.1.42 – Vessoft
AndroidIndlela yokuphilaIvidiyo e-intanethiVimeo
Isigaba: Ividiyo e-intanethi
Ikhasi elisemthethweni: Vimeo
Vimeo – a software ukubuka amarekhodi video of Vimeo service. Isofthiwe ikuvumela ukuba amavidiyo usebenzisa ikhamera noma khetha enye ekhona futhi ngezifiso isihloko, incazelo, tags, noma ubumfihlo. Vimeo kwenza nokuzala, susa noma ulayishe amavidiyo service. Isofthiwe ikuvumela uhlole umtapo omkhulu of amavidiyo, bazilinganise futhi bhalisela feeds. Vimeo kwenza ukwengeza amarekhodi ohlwini ukubukwa kamuva, share video nge izicelo ezahlukene, buka imibono ifayela ulwazi.
Buka amarekhodi video of service Vimeo
Ukwakha ukumisa of video
Layisha amavidiyo on service
Ikhono ukwabelana amavidiyo nge izicelo
Amazwana ku Vimeo
Vimeo software ehlobene
I-Dailymotion – enye yezinsizakalo zevidiyo ezaziwa kakhulu ngesisekelo esikhulu sokuqukethwe okuhlukahlukene. Isoftware inenjini yokusesha esebenzayo nekhono lokulayisha amavidiyo kunethiwekhi.
Isofthiwe ukubuka amabhayisikobho nezinhlelo ze-TV online in kwencazelo high. Isofthiwe kwenza ukulanda okuqukethwe kwabezindaba ngesivinini.
Isofthiwe ukulanda noma ukubuka amabhayisikobho kanye uchungechunge izinhlobonhlobo ezihlukene online. Isofthiwe amathuluzi anhlobonhlobo i ukusetshenziswa lula of service.
Indlela enhle yokwazi nabantu emhlabeni jikelele. Isofthiwe isekela imisebenzi yokuxhumana nomphakathi futhi iqukethe amathuba anwetshiwe wesistimu yokusesha yabasebenzisi.
Isicelo nge isethi yamakhonsathi ezithakazelisayo kusukela abantu esivelele kunazo ezindaweni ezahlukene. In the software kukhona amarekhodi eziningi kanye izinguqulo ezilimini ezahlukene kanye sihambisana izihlokwana.
Umjaho we-Beach Buggy – ngumdlalo kuhlobo lwezinhlanga ukuncintisana ngobunyoninco bezimoto ezihlukile kanye nabashayeli abahlukahlukene. Umdlalo unezindlela eziningi zokuphatha ezinamandla okuxhuma kulawulo lwegeyimu.
I-CPU-Z – uhlelo lokubonisa imininingwane eningiliziwe ngesimo sedivayisi. Umsebenzisi unethuba lokubuka idatha yememori, iprosesa, izinga lokushisa nezinye izinto zesistimu.
I-Google Khalenda – isoftware yokudala futhi ibuke uhlu lwezinto ezizokwenziwa, kanye nemicimbi ehlukahlukene. Isoftware ikuvumela ukuthi uhlele kahle uhlelo lwezinto eziphathelene nomsebenzi wakho.